Accueil > Gazetin'ny nosy > Minisitra vehivavy : Afa-baraka noho i Mama sôsy
Mitaraina mafy noho ny zava-misy nataon’i Mama Sôsy ny minisitra vehivavy maro amin’ny governemanta Ntsay Christian amin’izao fotoana izao. Raha vao mihaona amin’ny olona tsotra na fianakaviana na koa ireo namany izy ireo dia samy manambara avokoa fa afa-baraka tanteraka ny governemanta noho ny fitondran-tenany. Tsy mendrika ny ho minisitra hoy izy ireo.
Raha ny loharanom-baovao azo antoka dia efa nangataka ny fanesorana an’i Mama Sôsy koa ireo minisitra vehivavy ireo tao amin’ny filan-kevitry ny governemanta nefa tsy mbola nisy valiny izany hatramin’izao. Raha ny tokony ho izy dia efa tokony hametra-pialana ity minisitra Mama Sôsy raha ny fenitra repoblikanina no ampiharina. Tsy izany nefa no mitranga fa mbola nohamafisin’ny mpitondra Andry Nirina Rajoelina filoham-pirenena sy Ntsay Christian izay praiminisitra lehiben’ny governemanta ny sezan’i Mama Sösy ity.
Ho an’ny mpanaraka ny vaovao sy ny raharaham-pirenena dia mandoto tanteraka ny fanjakana ny tsy fandraisana andraikitra amin’ny fahafaham-baraka nahazo ny fitondram-panjakana. Hisy fiantraikany amin’ny raharaha politika izany ary ho tonga hatrany amin’ny fifidianana ny taona 2023.
Raha jerena koa ny fanatanterahana ny asa ao anatin’ny ministera dia tsapa fa tsy hita na kely ny fandrosoan’ny asa ao amin’ity ministeran’ny serasera ity. Ny asa fanaovan-gazety mikorontana izay tsy izy fa lasa miady sy tsy mifanaraka ny mpanao gazety manerana ny Nosy. Ny fandroahana mpiasa tsy an-drariny nitranga tao amin’ny RNM sy ny TVM dia ireny niarahana nahita ireny. Ny fanerena ny mpiasam-panjakana any amin’ny faritra hiditra ho ao amin’ny antoko “Freedom” izay antokon’i Mama Sôsy dia mbola tantara hafa koa.
Rariny raha toa ka nahatsiaro afa-baraka ny minisitra vehivavy noho izany.